Nikatona ny fivarotana an-tserasera! Afaka adiny roa latsaka dia manomboka ny famandrihana ny iPhone 13 sy iPad mini | Vaovao IPhone
Nikatona ny fivarotana an-tserasera! Afaka adiny roa latsaka dia manomboka ny famandrihan'ny iPhone 13 sy iPad mini
Ny orinasa Cupertino dia nanidy fivarotana an-tserasera manerana izao tontolo izao mandritra ny ora vitsivitsy miaraka amin'ny fikasana hanomboka amin'ny tahiry Ny iPhone 13, ny iPhone 13 Pro, ny iPhone 13 Pro Max, ny iPhone 13 mini ary ny iPad mini vaovao.
Amin'izay fotoana izay dia tokony ho vonona hiatrika ny fividianana ireo vokatra ireo avy hatrany isika rehetra satria mety ara-drariny ny isan'ny stock amin'ny fanombohan'ny varotra. Indray aorian'ny 14:00 hariva any amin'ny firenentsika dia ho hitantsika ny fomba misokatra ny magazay an-tserasera ary manomboka ny "hadalana" amin'ny fisafidianana ny maodely sy fametrahana ny lamina.
Ny Apple Watch Series 7 dia tsy maintsy miandry
Araka ny fantatsika rehetra tamin'ny andro fampisehoana Ny orinasa Cupertino dia hiandry kely kokoa hanokafana famandrihana ho an'ny Apple Watch Series 7. Toa ireny famantaranandro ireny dia efa voalahatra sahady hijerena fahatarana amin'ny fotoana fampisehoana ary efa voalazan'ny mpandinika ihany koa.
Amin'izao fotoana izao dia mihidy tanteraka ny fivarotana an-tserasera Apple ary efa ho vonona amin'ny fanombohana ny varotra, noho izany dia mailo ny rehetra mandra-pahatongan'ny fotoana hidirana sy hisafidianana ilay maodely irina. Ny loko vaovao sy ny endrika vaovao an'ny iPad mini dia iray amin'ireo manintona lehibe an'ity fanokafana fivarotana ity. Ho hitantsika ny fandehan'ny fotoana fandefasana rehefa mandeha ny ora voalohany nefa antenaina fa farafaharatsiny ny iPhone 13 ny tahiry dia ho ampy amin'ny fangatahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Nikatona ny fivarotana an-tserasera! Afaka adiny roa latsaka dia manomboka ny famandrihan'ny iPhone 13 sy iPad mini
Apple mandefa fitaovana vaovao ho an'ny mpamorona hampiroborobo ny fampiharana